ကိုဗစ်ကြောင့် အမှန် အကန် စမုံတုံးတော့မယ့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေ – Let Pan Daily
ကိုဗစ်ကြောင့် အမှန် အကန် စမုံတုံးတော့မယ့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေ
Let Pan | May 17, 2020 | Local News | No Comments
ဒီစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကတော့ ကိုဗစ်ကာလ မှာ အမှန်အကန် စမုံတုံးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ကိုဗစ်နှိပ်စက် လို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ စမုံတုံး သွားနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတချို့ ကို သုံးသပ်မိတယ်… ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလိုပေါ့… ဆိုင်တွေရဲ့ ၉၀% လောက်က နေရာငှားပြီး ဖွင့်ထားရတာပါ… ပါဆယ် Take Away နဲ့ Deli ဆိုတာကလဲ လုပ်ငန်း မရပ်သွားတာပဲ ရှိတာ၊ ရှူံးတောင် ရှူံးသေးတယ်… ပိတ်ထား ပြန်တော့လဲ နေရာငှားခနဲ့ ဝန်ထမ်းခတွေက ခွက်ခွက်လန်ပဲ… အကုန်အော်နေကြပြီ…
တချို့ Food Chain တွေဆိုရင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ရာချီ၊ ထောင်ချီရှိကြတာ… အခုကထဲက နားကားနေကြပြီလေ… ပြန်ပြီးဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်လဲ အကာ အကွယ်တွေ၊ Social Distancing တွေနဲ့ အခြားကန့်သတ် ချက် အစုံအလင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆတယ်… ဆိုင်မှာ လူများများ ထည့် မရအောင်နေရာ ခြားရတော့မယ်… လူများတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်လဲ တချို့လူက လာစား ရဲမှာ မဟုတ်ကြတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန် ရလောက်တယ်ပေါ့…
အရင်ကဆို အချိန်ရရင် ဘန်ကောက်လေး ရှော့ပင်ထွက် အုံးမှ၊ ဟိုလည် ဒီပါတ် လုပ်အုံးမှ ဆိုတာတွေလဲ တစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်… ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာယူရမယ်တို့ အာမခံရှိရမယ်တို့ ဖြစ်လာနိုင်တယ်…
ဒီလိုသာဆိုရင် မဖြစ်မနေ သွားရမယ့်ခရီး ပဲ သွားဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး အားအား ယားယား ခရီးထွက်ဖို့ ဒါတွေကို အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး လုပ်မနေချင်ဘူးလေ… ဒီတော့ လေကြောင်းလိုင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း နဲ့ ဟိုတယ်တွေ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိ စမုံတုံးနိုင်တယ်လို့ ယူဆတယ်… ဒီကို လာလည်မယ့်သူတွေကိုလဲ ဒီလို အကန့် အသတ် တချို့ လုပ်ထားနိုင် တာမို့ ဒီလုပ်ငန်း နဲ့ နှီးနွှယ်သူတွေ လတ်တလော ခါးမှာပဲ…
အဲ့ဒါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Supply တွေ၊ Souvenir Shop တွေ၊ Taxi တွေ၊ Guide တွေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အကုန်လုံး ပါတ် လည် ထိ ကြမယ့်အနေအထားပါ… အလှူတွေ၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေ တော်တော်နဲ့ လုပ်လို့ရအုံးမယ် မထင်သေးတော့ ဒါနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဆိုင်၊ ပန်း အလှပြင် ဆိုင်၊ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုနဲ့ Catering တွေပါ ငါးပါးမှောက်မယ့် သဘော မှာရှိတယ်…
ကျန်သေးတယ်… ဖျော်ဖြေရေး နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေလဲ အခြေအနေမကောင်းဘူး… Live Show ပွဲတွေ၊ ကလပ်တွေ၊ KTV၊ မာဆတ်၊ Nail Salon နဲ့ Beauty Clanic တွေ မလွယ်လောက်သေးဘူး… ပြန်ဖွင့်ရင်တောင်မှာ အရင်လို အလုပ်ကောင်း ဖို့ အရှိန်တော်တော်ယူရနိုင်တယ်…
ဒါ့အပြင် လူတိုင်းနီးပါး စီးပွားရေး အခြေအနေ အထိနာ ထားတော့ အင်္ကျီအဝတ်အထည်တွေနဲ့ Brand ဆိုင်တွေလဲ အခြေအနေ မကောင်း နိုင်သေးတာ သေချာတယ်… ရုပ်ရှင်ရုံတို့ Gym တို့လဲ လတ်တလော အနေအထားကတော့ ပျားတုပ်မယ့်ကိန်းပဲ… အနုပညာရှင်တွေ ဆယ်လီ ဆယ့် တစ်လီတွေ လဲ ရောယောင်ပြီး ပါသွားမှာပါ…
အခုလောလောဆယ် အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်း က ဘာလဲ သိလား? ဒါကတော့ အရက်သေစာပါပဲ… Stay Home ရင်း ဘီယာ၊ အရက်၊ ဝိုင်၊ ဆာကေးချကြတယ်ပေါ့… စမုံတုံးတဲ့အထဲလဲ ဘယ်တော့မှ သူမပါဘူး…
ဒါက တစ်ဦးထဲ ခန့်မှန်းချက်ပါ… မှန်ချင် လဲ မှန်မယ်၊ မှားချင်လဲ မှားမယ်… ရှေ့လျှောက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်နဲ့ လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ကြရတော့မှာပါ… အဓိကကတော့ ကိုယ့် အလုပ်ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာပြီး ကိုဗစ်ကြောင့် စမုံတုံးတဲ့ထဲ ပါမ သွားဖို့ပဲ…
Zin Min Swe
ဒီစီးပှားရေး လုပျငနျးတှကေတော့ ကိုဗဈကာလ မှာ အမှနျအကနျ စမုံတုံးကွမှာ ဖွဈပါတယျ…
ကိုဗဈနှိပျစကျ လို့ အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခုထိ စမုံတုံး သှားနိုငျတဲ့ လုပျငနျးတခြို့ ကို သုံးသပျမိတယျ… ဥပမာ စားသောကျဆိုငျလုပျငနျးတှလေိုပေါ့… ဆိုငျတှရေဲ့ ၉၀% လောကျက နရောငှားပွီး ဖှငျ့ထားရတာပါ… ပါဆယျ Take Away နဲ့ Deli ဆိုတာကလဲ လုပျငနျး မရပျသှားတာပဲ ရှိတာ၊ ရှူံးတောငျ ရှူံးသေးတယျ… ပိတျထား ပွနျတော့လဲ နရောငှားခနဲ့ ဝနျထမျးခတှကေ ခှကျခှကျလနျပဲ… အကုနျအျောနကွေပွီ…
တခြို့ Food Chain တှဆေိုရငျ ဝနျထမျးပေါငျး ရာခြီ၊ ထောငျခြီရှိကွတာ… အခုကထဲက နားကားနကွေပွီလေ… ပွနျပွီးဖှငျ့ရမယျဆိုရငျလဲ အကာ အကှယျတှေ၊ Social Distancing တှနေဲ့ အခွားကနျ့သတျ ခကျြ အစုံအလငျရှိလိမျ့မယျလို့ ယူဆတယျ… ဆိုငျမှာ လူမြားမြား ထညျ့ မရအောငျနရော ခွားရတော့မယျ… လူမြားတဲ့ဆိုငျဆိုရငျလဲ တခြို့လူက လာစား ရဲမှာ မဟုတျကွတော့ ခကျခကျခဲခဲ ရုနျးကနျ ရလောကျတယျပေါ့…
အရငျကဆို အခြိနျရရငျ ဘနျကောကျလေး ရှော့ပငျထှကျ အုံးမှ၊ ဟိုလညျ ဒီပါတျ လုပျအုံးမှ ဆိုတာတှလေဲ တဈမြိုးပွောငျးသှားနိုငျတယျ… ကနျြးမာရေးထောကျခံစာယူရမယျတို့ အာမခံရှိရမယျတို့ ဖွဈလာနိုငျတယျ…
ဒီလိုသာဆိုရငျ မဖွဈမနေ သှားရမယျ့ခရီး ပဲ သှားဖွဈမှာဖွဈပွီး အားအား ယားယား ခရီးထှကျဖို့ ဒါတှကေို အလုပျရှုပျခံပွီး လုပျမနခေငျြဘူးလေ… ဒီတော့ လကွေောငျးလိုငျး၊ ခရီးသှားလုပျငနျး နဲ့ ဟိုတယျတှေ အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခု ထိ စမုံတုံးနိုငျတယျလို့ ယူဆတယျ… ဒီကို လာလညျမယျ့သူတှကေိုလဲ ဒီလို အကနျ့ အသတျ တခြို့ လုပျထားနိုငျ တာမို့ ဒီလုပျငနျး နဲ့ နှီးနှယျသူတှေ လတျတလော ခါးမှာပဲ…
အဲ့ဒါတှနေဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ Supply တှေ၊ Souvenir Shop တှေ၊ Taxi တှေ၊ Guide တှေ၊ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှေ အကုနျလုံး ပါတျ လညျ ထိ ကွမယျ့အနအေထားပါ… အလှူတှေ၊ မင်ျဂလာဆောငျတှေ တျောတျောနဲ့ လုပျလို့ရအုံးမယျ မထငျသေးတော့ ဒါနဲ့ ပါတျသကျတဲ့ ဖကျရှငျဆိုငျ၊ ပနျး အလှပွငျ ဆိုငျ၊ ဓာတျပုံ ဗီဒီယိုနဲ့ Catering တှပေါ ငါးပါးမှောကျမယျ့ သဘော မှာရှိတယျ…
ကနျြသေးတယျ… ဖြျောဖွရေေး နဲ့ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးတှလေဲ အခွအေနမေကောငျးဘူး… Live Show ပှဲတှေ၊ ကလပျတှေ၊ KTV၊ မာဆတျ၊ Nail Salon နဲ့ Beauty Clanic တှေ မလှယျလောကျသေးဘူး… ပွနျဖှငျ့ရငျတောငျမှာ အရငျလို အလုပျကောငျး ဖို့ အရှိနျတျောတျောယူရနိုငျတယျ…
ဒါ့အပွငျ လူတိုငျးနီးပါး စီးပှားရေး အခွအေနေ အထိနာ ထားတော့ အင်ျကြီအဝတျအထညျတှနေဲ့ Brand ဆိုငျတှလေဲ အခွအေနေ မကောငျး နိုငျသေးတာ သခြောတယျ… ရုပျရှငျရုံတို့ Gym တို့လဲ လတျတလော အနအေထားကတော့ ပြားတုပျမယျ့ကိနျးပဲ… အနုပညာရှငျတှေ ဆယျလီ ဆယျ့ တဈလီတှေ လဲ ရောယောငျပွီး ပါသှားမှာပါ…
အခုလောလောဆယျ အကောငျးဆုံး လုပျငနျး က ဘာလဲ သိလား? ဒါကတော့ အရကျသစောပါပဲ… Stay Home ရငျး ဘီယာ၊ အရကျ၊ ဝိုငျ၊ ဆာကေးခကြွတယျပေါ့… စမုံတုံးတဲ့အထဲလဲ ဘယျတော့မှ သူမပါဘူး…
ဒါက တဈဦးထဲ ခနျ့မှနျးခကျြပါ… မှနျခငျြ လဲ မှနျမယျ၊ မှားခငျြလဲ မှားမယျ… ရှလြေှ့ောကျ စညျးမဉျြးစညျးကမျးပိုငျးမှာ တျောတျောလေး ကဉျြးကဉျြးကွပျကွပျနဲ့ လှုပျရှား ရုနျးကနျကွရတော့မှာပါ… အဓိကကတော့ ကိုယျ့ အလုပျရရှေညျ ရပျတညျနိုငျအောငျ နညျးလမျးရှာပွီး ကိုဗဈကွောငျ့ စမုံတုံးတဲ့ထဲ ပါမ သှားဖို့ပဲ…
ဧပြီလ မီတာခ များနေတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ တဲ့ အခြေအနေများ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ (အဲဒါကြောင့် မီတာများ ဖြစ်နေတာများလား)
No Comments | May 12, 2020
နွမ်းပါးသူတွေ အတွက် အခြေ ခံစားကုန် Food Box ထားပေး လိုက်တဲ့ စေတနာရှင် လူငယ်
လမ်းများပေါ် ဆေးဖျန်းခြင်းကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးမသေစေနိုင်ဘဲ ကျန်းမာရေး ကိုသာ ထိခိုက် စေနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) သတိပေး
တောသားတွေ ဟာ နွားတေလို့ ပြောလာတဲ့ မိန်းကလေး (ရုပ်/သံ) ရုပ်လေးသနားကမား နဲ့ အောက်တန်းကျချက်က
No Comments | Jun 2, 2020
ဆှဲမကျဖှယျ ရငျသပျရှုမောစရာ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှေ နဲ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ ရငျကို ဆှဲဆောငျ ညို့ယူထားတဲ့ မရေတီဇျော
မွဝတီက ရဘေေးသငျ့ပွညျသူတှရေဲ့ လတျတလောဝမျးရေးအတှကျ ထမငျးဟငျးတှေ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ နဝေငျး နဲ့ အိမျ့ခဈြခြော
ပုရိသတှေ ကို အမိုကျစား ပုံစံလေး နဲ့ ဆှဲဆောငျ လိုကျ တဲ့ “မဘေရဏီစံ”
လူသားအခငျြးခငျြး ကိုယျခငျြးစာ တရားထားပွီး အောကျစီဂငျြအိုးတှကေို မတနျတဆမရောငျးကွဖို့ ပွောလာတဲ့ သရုပျဆောငျဖှေးဖှေး
အမိုကျစား ဖကျရှငျလေး နဲ့ ပုရိသတှကေို ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျ လှနျးတဲ့ မွစမျးသီတာ
ဦးမတ်ေတာ နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အမှတျတရတှကေို ဝမျးနညျးစှာဖွငျ့ ပွောပွ ခဲ့ကွတဲ့ အနုပညာရှငျမြား